Vardy oon arooskiisa dib u dhigaynin mar kale - BBC Somali
Vardy oon arooskiisa dib u dhigaynin mar kale
Image caption Jamie Vardy, markan arooska ma baajinayo
Weerar yahanka kooxda Leicester City, Jamie Vardy, ayaan u safan doonin xulka dalkiisa ciyaarta saaxiibtinimo ee ay wada yeelanayaan Australia maalinta Jimcaha ah, sababtuna waa in uu aroos galayo laba cisho ka hor maalinta ciyaartu dhici doonto.
Ninkan 29 jir ka ah ayaa sannadkii hore hakiyay arooskiisa oo dib u dhigay, laakiin hadana mar labaad ka badalay qorshihii ahaa inuu dhaco bisha June, si uu uga qayb qaato ciyaaraha Euro 2016.
Tababaraha xulka Ingiriiska, Roy Hodgson, ayaa yidhi Vardy wuu istaahilaa inuu fasax uu ku aqal galo helo.
Xulka England oo isku sii diyaarinaya tartanka Euro 2016 ayay xulka Australia ku wada ciyaari doonaan garoonka kooxda Sunderland ee Stadium of Light.
Vardy oo dhaliyayy 24 gool intii ay socdeen ciyaarihii Premier League ayaa gacan wayn ku lahaa guushii kooxda Leicester ay ku hanatay koobka horyaalka Ingiriiska. Sidoo kale wuxuu dhaliyay koobkii guushu ku raacday Ingiriiska ee ay kaga adkaadeen xulka Turkey oo ay 2-1 kaga badiyeen Axaddii